Mifanerasera: Mamokatra atiny tsara kokoa kokoa matetika. Martech Zone
Alahady 6 Janoary 2013 Alakamisy, Aprily 25, 2013 Douglas Karr
Fony aho niasa famintinana, ny hany mampiavaka ny fahombiazana bilaogy orinasa programa sy ireo niady dia ny habetsahan'ny atiny mahaliana sy miavaka izay azon'izy ireo novokarina. Taona maro taty aoriana ary mbola io no olana saika ny mpanjifa na ny vinavinantsika rehetra momba ny fananganana ny paikadim-barotra momba ny votoatiny.
Misy antony vitsivitsy… tsy fahampian'ny ho enti-miasa, manery ny fahalavorariana ao anaty, ary ny farany tsy mahalala izay hosoratanao. Mahagaga fa ny orinasa iray dia afaka mamokatra mailaka ivelany an-jatony ho an'ny vinavina sy ny mpanjifa manampy azy ireo hahomby, saingy mipetraka amina tonian-dahatsoratry ny bilaogy misokatra izy ireo ary mivaingana.
Mifanakaloza hevitra dia sehatra iray manampy ny ekipan'ny bilaoginao hamorona hevitra sy atiny ho an'ny paikadim-bolongan'ny orinasa:
Drafitra sy fikarohana - Mamorona paikady atiny sy alàlan'ny famoahana lahatsoratra manodidina ny hevitra momba ny lohahevitra, ny fironana amin'ny indostria ary ny fahaizan'ny ekipanao (sy ny vahiny).
Mamorona sy miara-miasa - Fiaraha-miasa matotra amin'ny alàlan'ny dingam-pampivoarana atiny. Omeo andraikitra haingana ny ekipanao, ny vahininao ary ny mpifanaraka aminao.
Manatsara sy mizara - Manondro ary mifandray amin'ireo mpisolo vava ny marika sy ny influencers ho an'ny voa tsara kokoa ary ny fizarana manan-tsaina kokoa.
Ny vidiny dia tena mora vidy, manomboka amin'ny $ 29 isam-bolana ho an'ny mpampiasa 5 hatramin'ny $ 299 isam-bolana ho an'ny mpampiasa 70! Mamoaha mivantana amin'ny alàlan'ny WordPress, Tumblr sy ny hafa ho toy ny volavolan-dalàna na fanjakana mivantana, na kopia ny kaody HTML amin'ny tsindry iray raha mizara haingana.
Tags: fiaraha-miasa amin'ny atinyhevitra momba ny votoatybilaogy orinasamifampiresaka
Miasa ve ny doka?